Excavators Factory - China Excavators Manufacturers, abahlinzeki
4 iloli drive forklift iloli
Amaloli we-4WD Forklift
4WD eziqondisa ngemuva Forklift Amaloli
Amamodeli we-Backhoe Loader
Ama-Backhoe Loader ayathengiswa
Ama-Mixers Wokhonkolo Wokuzimela
umshini wokuxuba ukhonkolo
Imishini Yokuxuba Ukhonkolo
I-China Wheel Loader
Ama-Front End Loader
Ama-Loader Wheel Wosayizi Ogcwele
Mini Isondo Loader
WIK956 Isilayidi esilayishayo
I-WIK 6800 Self Loading Mixers Yokhonkolo
Amaloli ama-Forklift angama-5.0-ton
WIK9070 Isondo Excavator
I-WIK388 Backhoe Loader
I-4 TON 4 × 4 Ijika eline Forklift
WIK9085 Isondo Excavator
Iphuzu lokuthengisa lomkhiqizo le-WIK 9085 · Injini yomkhiqizo odumile yasekhaya inamandla aqinile futhi ihlangabezana nezidingo zokusebenza ngokufanele. Umklamo ofanelekile wokulawula nokonga okuthuthukile kwamandla kwenza ukusetshenziswa komshini kukaphethiloli kube kuncane. · Ukusetshenziswa kwamafeni amasha okupholisa nezithulisi ezinkulu kwenza umsindo womshini ube phansi; · Sebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-turbocharging ukuthuthukisa ukuguquguquka komshini ethafeni; · Ikhava eyingqayizivele yefeni emise okwefaneli yandisa kakhulu ukungena komoya ...
Iphuzu lokuthengisa ngomkhiqizo le-WIK 9070 · Injini yomkhiqizo odumile yasekhaya inamandla aqinile futhi ihlangabezana nezidingo zokusebenza kahle. Umklamo ofanelekile wokulawula nokonga okuthuthukile kwamandla kwenza ukusetshenziswa komshini kukaphethiloli kube kuncane. · Ukusetshenziswa kwamafeni amasha okupholisa nezithulisi ezinkulu kwenza umsindo womshini ube phansi; · Sebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-turbocharging ukuthuthukisa ukuguquguquka komshini ethafeni; · Ikhava eyingqayizivele yefeni emise okwefaneli yandisa kakhulu ukungena komoya ...
WIK9088 Isondo Excavator
Iphuzu lokuthengisa ngomkhiqizo le-WIK 9088 · Injini yomkhiqizo odumile yasekhaya inamandla aqinile futhi ihlangabezana nezidingo zokusebenza ngokufanele. Umklamo ofanelekile wokulawula nokonga okuthuthukile kwamandla kwenza ukusetshenziswa komshini kukaphethiloli kube kuncane. · Ukusetshenziswa kwamafeni amasha okupholisa nezithulisi ezinkulu kwenza umsindo womshini ube phansi; · Sebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-turbocharging ukuthuthukisa ukuguquguquka komshini ethafeni; · Ikhava eyingqayizivele yefeni emise okwefaneli yandisa kakhulu ukungena komoya ...